အဆိုပါဗီယက်နမ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအက်ဥပဒေနိုဝင်ဘာလ 26 ရက်တွင်ဗီယက်နမ်၏ 13 ကွန်ဂရက်၏အဌမ Congress မှာမွေးစားခဲ့သည်,2014 ခုနှစ်,.7 အခန်းကြီး 76 နဲ့4နောက်ဆက်တွဲရှိပါတယ်.ဇူလိုင်လ 1 ဖြစ်ရလိမ့်မည်,2015 ထိရောက်သော,2005 အစားထိုးဖို့&quote;ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ&quote;
ဤဥပဒေကို investee နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှစ်ဦးစလုံးနှင့်သက်ဆိုင်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတ်ပုံတင်ရေးဦးလက်မှတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်သတင်းအချက်အလက်များအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ပါဝင်တဲ့ဖိုင်တစ်ဖိုင်သို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ် file ကိုဆိုလိုသည်.
အများပြည်သူသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကမိတ်ဖက်၏ပုံစံအတွက်တစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်(hereinafter တစ်ဦးပီပီပီစာချုပ်အဖြစ်ရည်ညွှန်း)ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အာဏာနှင့်အစိုးရအခွင့်အာဏာဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဤဥပဒေပုဒ်မ 27 နှင့်အညီတစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုထုတ်သယ်ဖို့ program တစ်ခုအကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့စာချုပ်ဆိုလိုသည်.
ပို့ကုန်ဧရိယာ processing ပို့ကုန်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြုစက်မှုနယ်မြေကိုရည်ညွှန်းသည်,ပို့ကုန်ထုတ်ကုန်များ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ပို့ကုန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာစေ့စပ်.
ဤဥပဒေမှဤဥပဒေနောကျဆကျတှဲမှနောက်ဆက်တွဲ 1 တွင်ဖော်ပြထားသောအဆိုပါနောက်ဆက်တွဲ;
ဤဥပဒေမှနောက်ဆက်တွဲ2တွင်ဖော်ပြထားသောအဆိုပါဓာတုပစ္စည်းများနှင့်သတ္တုဓာတ်;
ထိုနိုင်ငံတကာရောင်းမည်အပေါ်ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်တောရိုင်း၏အရစ်ကျနဲ့အန္တရာယ်ကြုံတိရစ္ဆာန်များနှင့်အပင်မှနောက်ဆက်တွဲ 1 တွင်ဖော်ပြထားသောအဆိုပါတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များ;အမျိုးမျိုးသောရိုင်းသောမျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိတိရစ္ဆာန်နှင့်အပင်များ၏စစ်ဆင်ရေးဤဥပဒေမှနောက်ဆက်တွဲ3Group က 1 မှာစာရင်းကသဘာဝရင်းမြစ်များနှင့်အတူ specimens;
လူ့ asexual မျိုးပွါးဖို့အရေးကြီးတယ်.
ဤဥပဒေပါနောကျဆကျတှဲ4နှင့်အညီစက်မှုစီမံကိန်းများ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် operating အခြေအနေများကိုဗီယကျနမျအက်ဥပဒေပေါ်တွင်အခြေခံ,ထိုကြေညာချက်နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းအတွက်ဗီယက်နမ်ပါဝင်လာခြင်း.အားလုံးဝန်ကြီးဌာနများ,ဌာနဆိုင်ရာ,လူထု's ကိုအသင်းတော်များ,လူထု'အားလုံးအဆင့်ဆင့်မှာကိုယ့်ကော်မတီများ,ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ,အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အခြားတစ်ဦးချင်းစီ,အခြေအနေအရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုလိုအပ်ချက်များကိုထုတ်ပေးခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်မဟုတ်.
conditional ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စစ်ဆင်ရေးဒီအပိုဒ်၏ပစ္စည်းကို 1 မှာထုတ် ထား. ရည်မှန်းချက်များဖြည့်ဆည်းရကြလိမ့်မည်နှင့်ပွင့်လင်းကြောင်းအာမခံရကြလိမ့်မည်,ရှင်းလင်းသော,ရည်မှန်းချက်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်အားဖြင့်လျော့ပါး.
သစ်လွှတ်ပေးရန်အတွက်သတ်မှတ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကမ်းလှမ်းမှုကိုအ investee ခံစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု preference ကိုထက်သာလွန်သည်ဆိုပါက,ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမေလ,သစ်ဥပဒေနှင့်အညီ,မူရင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်၏ကျန်တဲ့ကာလကိုကာလအတွင်းအသစ်ကမ်းလှမ်းမှုပျော်မွေ့.
■အ investee အပေါ်ဝင်ငွေအခွန်အနေဖြင့်အမှန်တကယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု offset;
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်အက်ဥပဒေအင်အားသုံးသို့ entry ကို၏နေ့စွဲကနေ3နှစ်အတွင်းရေးသားထားသောတောင်းဆိုချက်ကိုတင်ပြရမည်.
ကျော်ကို6ထရီလီယံ VND ၏အရွယ်အစားနှင့်အတူ,နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရည်ရွယ်ချက်များရရှိရန်ဆုံးဖြတ်ချက်၏ထုတ်ပေးရေးမှအနည်းဆုံး6ထရီလီယံ VND အစီအစဉ်ရန်ပုံငွေရက်စွဲကနေ3နှစ်အတွင်း
ကျေးလက်ဒေသများရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံ 500 ကျော်အလုပ်သမားအစီအစဉ်များ employ
■လူမှုရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံစနစ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် Assist ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများ၏အတိုင်းအတာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ
■R ကိုပေး&D ကိုအကူအညီ.
-အဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတ်ပုံတင်ခွင့်အာဏာရကြမည်,ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရည်ရွယ်ချက်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်လက်ခံရရှိသည့်နေ့ရက်မှ5အလုပ်လုပ်ရက်အတွင်း,ဆောင်းပါးများ 30 ရက်နှင့်အညီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရည်ရွယ်ချက်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်၏လျှောက်လွှာများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါတီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတ်ပုံတင်တဲ့လက်မှတ်ထုတ်ပေး,31 ဤဥပဒေတွင်အဆိုပါ 32
တစ်ဦးက)ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအပိုဒ် 33 ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတ်ပုံတင်ခွင့်အာဏာမှစာရွက်စာတမ်းတင်ပြ,ဤဥပဒေအပိုဒ် 1;
B က)အဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတ်ပုံတင်ခွင့်အာဏာပြီးပြည့်စုံသောအမိန့်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် 15 ရက်အတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတ်ပုံတင်တဲ့လက်မှတ်ထုတ်ပေးရမည်.အငြင်းဆန်ကိုဖန်ဆင်းသည်ဆိုပါ,ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရေးသားအကြောင်းကြားခံရကြလိမ့်မည်နှင့်အကြောင်းပြချက်အသေးစိတ်အတွက်ပေးထား.
စက်မှုဇုန်,processing ပို့ကုန်ဇုန်,မြင့်သော-လကျခံဖို့နည်းပညာပန်းခြံနှင့်စီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီက,စက်မှုနယ်မြေကိုပြောင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းရန်,processing ပို့ကုန်ဧရိယာ,မြင့်သော-နည်းပညာဥယျာဉ်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်စီးပွားရေးဇုန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု.
အဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရုံးကလက်ခံ,အပြောင်းအလဲများနှင့်စက်မှုဇုန်ဧရိယာပြင်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမှုများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကိုရုပ်သိမ်းခံခဲ့ရပါ,အအပြောင်းအလဲနဲ့ပို့ကုန်ဇုန်,အမြင့်ဆုံးသော-နည်းပညာဥယျာဉ်နှင့်စီးပွားရေးဇုန်,ဒီအပိုဒ်၏အပိုဒ်3မှာပေးအဖြစ် မှလွဲ..
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ် code ကို.
ထို program ၏ကြာချိန်စီစဉ်.
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကိုပြောင်းလဲဖို့ investee ၏ဆုံးဖြတ်ချက်;
အပိုဒ် 33,အပိုဒ် 1,B က,ကို C,: D,E ကို,F ကို,ဤဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများအပေါ်သတင်းအချက်အလက်, G.
ပြီးပြည့်စုံသောလျှောက်လွှာစာရွက်စာတမ်းများကိုလက်ခံရရှိ၏ 10 အလုပ်လုပ်ရက်အတွင်း,ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကိုပြောင်းလဲရန်မှတ်ပုံတင်ထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အာဏာကိုလက်ခံ;
တစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရည်ရွယ်ချက်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ရှိသည်ဖို့အစီအစဉ်၏အမှု၌,သောအခါသက်ဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုပစ်မှတ်,ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတည်နေရာ,အဓိကကနည်းပညာ,ကျော်ကို 10 တိုးလာသို့မဟုတ်လျော့နည်း%,စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကို,ကွပ်မျက်ကာလ,ပြောင်းလဲမှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲမှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွအေနအေ(ရှိလျှင်),ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကိုပြောင်းလဲဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတ်ပုံတင်ခွင့်အာဏာ,လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဆုံးဖြတ်ဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရည်ရွယ်ချက်ကို.
အစိုးရကမြေယာကိုအသုံးပြုသည်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတည်နေရာကိုအသုံးပွုဖို့ဆက်လက်ခွင့်မပြုတဲ့အခါရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်နေ့ရက်မှ6လအတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတည်နေရာပြောင်းလဲ၏ခွင့်သဘောတူစာချုပ်အားဖြင့်မသွားရကြလိမ့်မည်.
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်တွင်တက်ကြွစွာဖြစ်မပြောဘဲနေခဲ့ဖူး,နှင့်လှုပ်ရှားမှုများ၏ချုပ်ရာ မှစ. 12 လအတွင်း,ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတ်ပုံတင်ခွင့်အာဏာအဆက်အသွယ်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်နှင့်အတူမဖွစျနိုငျ;
12 လရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတ်ပုံတင်ခွင့်အာဏာများ၏မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်,ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလုပ်ဆောင်မထားဘူးသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်နဲ့နိုင်စွမ်းရှိသည်ပါဘူး,ဤဥပဒေပုဒ်မ 46 နှင့်အညီ,
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.vietnam-investment.com/my/vietnam-investment-law-2.html